6 ठूलो निबंध लेखन चरणहरु
काम लिखित कि बन्द मौका मा एउटा लेख एक भारी पृष्ठभूमि जस्तै देखिन्छ, त्यसपछि कसरी विभिन्न सरल strides मा प्रक्रिया विभाजन गर्न सोचिरहनुभएको तपाईं एक आकर्षक बनाउन छ तपाईं निश्चय दिनेछु, काम अचम्मको बिट. यस लेखमा दिन्छ6प्रदर्शनी सुझाव रचना पुरा वस्तुमा मार्फत एक जन्माउने विचार तपाईं हुनेछ भनी.
1. painstakingly आफ्नो विषय चयन
घटना मा आफ्नो विषय विभिन्न दृष्टिकोण छ, त्यसपछि टिप रचना एउटा असाध्यै उपयोगी प्रदर्शनी एक विशेष क्षेत्र तल यसलाई पातलो छ, र तपाईं आफ्नो प्रस्तुति मा यो स्पष्ट सुनिश्चित. यो भन्दा यदि तपाईं सबै कुरा ढाक्न प्रयास perusing लागि सुधार हुनेछ, र आफ्नो काम को प्रकृति बृद्धि हुनेछ. घटनाको तपाईंले आफ्नो विशेष बिन्दु छनोट गर्न मौका प्राप्त, तपाईं संग मग्न छन् यो कुरा बनाउन. यी रेखाहरू साथ अन्वेषण धेरै कम मांग हुन बाहिर हुनेछ र आफ्नो ऊर्जा आफ्नो perusers मा 'RUB बन्द' हुनेछ.
2. तपाईंको अनुसन्धान गर्न
अर्को बहुमूल्य प्रदर्शनी रचना टिप तपाईं आफ्नो छानिएको बिन्दु को भागहरु को हरेक एक अनुसन्धान पर्याप्त ऊर्जा लगानी सुनिश्चित गर्न छ. रूपमा reasonably अपेक्षा गर्न सकिएन तर धेरै उचित सामाग्री Perused, तपाईं मन केहि मा सहन त र सँगसँगै टिप्पणीहरू बनाउन. यसबाहेक तपाईं आफ्नो विचार छ जहाँ तल ध्यान दिनुहोस्; i.e. लेखक नाम, पुस्तक वा लेख शीर्षक र पृष्ठ संख्या.
3. को मुख्य अर्जेन्टिना रेकर्ड
एक पटक तपाईं आफ्नो विषयमा प्रश्न गर्नुभएको, तपाईं perused गरेको मौलिक contentions र विचार छोटो पार्नु. अन्य व्यक्तिहरूलाई 'शब्द नक्कल गर्न प्रयास, बस अत्यावश्यक केंद्रित टिप्न र आफ्नो विशेष शब्दहरू यी सानो पार्नु. यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनी रचना टिप छ - जो तपाईं, तपाईं अर्को निर्माता काम नक्कली छैन सुनिश्चित.
साथै पढ्नुहोस्: 5औं मार्च, 2018 Sankashti Chaturthi Moonrise समय भारत मा (चन्द्र समय उठेर5मार्च)
स्थान बिन्दु शीर्षकहरू मा प्रदर्शनी को आवश्यक संरचना सेट अप, हरेक मौलिक बिन्दु चित्रण बस एक जोडी शब्दहरू उपयोग गर्न. को उत्तराधिकारी सही छ भन्ने महसुस सम्म संरचना संग वरिपरि प्ले. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु सुरुमा राख्न, निम्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिन्दु द्वारा पीछा, र यति.
त्यस बिन्दु मा हरेक शीर्षक अन्तर्गत तपाईंको अन्वेषण रनडाउन्स गोंद (तपाईं पछि यी मेटाउन सक्छ).
4. को निबंध को शारीरिक आउट गोलो
यो तपाईं छानिएको विषय मा सूक्ष्म तत्व मा जाँच्न आफ्नो musings र विचार स्थान हो, र 'राउन्ड बाहिर' तपाईंले पहिले बनेको यो रूपरेखा. हरेक मौलिक बिन्दु अन्तर्गत, तपाईंको hypotheses समर्थन पुष्टि प्रस्तुत, सँगै contentions संग र केही अन्य बनाउन चाहनुहुन्छ केंद्रित. एक सभ्य लेख रचना टिप यी उत्तेजक र आकर्षक छन् सुनिश्चित छ, र पनि enlightening.
निष्कर्षमा केही क्रमबद्ध हरेक खण्डमा वा खण्ड समाप्त, वा निम्न खण्ड गर्न वाक्य 'मा नेतृत्व'.
तपाईं लेखको मौलिक शरीर बनेको छ देखि, तपाईँले-अनुहार को 'प्रस्तुति' रचना गर्न सक्छन्, कागज 'निष्कर्ष' द्वारा पीछा.
5. तपाईंको परिचय रचना
केही तरिकामा यो तपाईंको प्रदर्शनी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो. सबै भन्दा राम्रो लेख रचना सुझाव को एक peruser गरेको विचार प्राप्त गर्न prologue उपयोग र तिनीहरूलाई भनी perusing जारी गर्न आवश्यक गर्नेछ आउन डाटा "स्वाद" दिन छ.
लेख बारे के चाँडै फोटो, र आफ्नो परीक्षा स्रोतहरू, र peruser कागज perusing उम्कन हुनेछ के स्पष्ट. आफ्नो दृष्टिकोण को एक unmistakable स्पष्टीकरण संग प्रस्तुति पूरा, वा प्राथमिक कागज को लाग्यो.
साथै पढ्नुहोस्: मनसुन मौसममा पानी लग समस्या बारे सम्पादक गर्न पत्र
6. तपाईंको निष्कर्ष रचना
चाँडै आफ्नो अन्वेषण को परिणाम र finishes abridging यो खण्ड सुरु. आफ्नो मौलिक निर्णय के छ peruser भन्नुहोस्, र किन. सुनिश्चित तपाईं अतिरिक्त जाँच र प्रदर्शनी को अन्त तिर जानेछ आफ्नो उल्लेख प्रबन्ध छ.
एक असाधारण लेख रचना टिप एक विशाल संग कागज अन्त छ, चाखलाग्दा articulation कि तरिका 'entireties अप' आफ्नो आविष्कारहरू.
यी लेख रचना सुझाव तपाईं एक चारैतिर संगठित कागज छुटकारा मदत गर्नेछ, अझै बदल र कुनै हिज्जे छन् ग्यारेन्टी गर्न पूर्ण आफ्नो काम सम्पादन गर्न सम्झना, syntactic वा accentuation blunders.
« Groundhog DAY 2017 उद्धरण, तस्बिरहरू, SLOGANS, WIKI, छाया
एमबीए ASPIRANT लागि कलेज ADMISSION दिशानिर्देश थाहा गर्नै पर्ने »